Evaporative jụrụ: ihe ọ bụ, njirimara na ojiji | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime usoro nke na-eme na ndammana nke a na-eji maka arụmọrụ ume bụ evaporative jụrụ. Ọ bụ usoro ebumpụta ụwa nke na-eji mmiri dị ka refrjiraeto iji nweta ntụ oyi ma ọ bụ ihe jụrụ oyi. N'ihi ọmụmụ nke ọrụ nke usoro a, ọ ga-ekwe omume inwekwu arụmọrụ dị jụụ n'ọtụtụ ebe.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mkpa na ịba uru nke ikuku jụrụ.
2 Uru nke evaporative jụrụ
2.1 Nchekwa ike
2.2 Mmetụta dị ala na gburugburu ebe obibi
2.3 Nnukwu nchebe
3 Ngwa ngwa ngwa na-arụ ọrụ
Evaporative jụrụ bụ ihe ọ bụla ọzọ a eke usoro nke na-eji mmiri dị ka a coolant. Usoro a bụ ụkpụrụ dị n'azụ akụrụngwa refrjiraeto niile, ụlọ elu na condensers. A na-eji ngwaọrụ ndị a eme ka mmiri dị jụụ n'ụdị azụmahịa, ụlọ ọrụ na ụlọ. N'oge oyi na-ekpo ọkụ, a na-ewepụ okpomọkụ niile na-abanye na mbara igwe site na evaporation nke mmiri. Maka usoro a iji mee, ịkpọtụrụ n'etiti mmiri na iyi ikuku dị n'ime onye na-ekpo ọkụ ọkụ dị mkpa.
Anyị maara na nke a evaporative jụrụ bụ ezigbo maka ngwa na nke ọ dị mkpa iji nwee ike belata elu okpomọkụ. Uru nke usoro a karịa ndị ọzọ bụ na ọ ga-ekwe omume belata ọnọdụ okpomọkụ na-enweghị oke oriri ike. N'ihi ya, Ọ bụ echiche bara uru site na echiche ike na ichekwa maka gburugburu.
Uru nke evaporative jụrụ
Ekele site na ikuku evaporative, enwere ọtụtụ ụlọ elu jụrụ oyi, condensers na ngwaọrụ ndị ọzọ metụtara a pụtara oru oma ọzọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ulo oru oyi oru. Na mpaghara a, a na-eji igwe iji belata ọnọdụ okpomọkụ ma jiri usoro ndị na-eme ka gburugburu ebe obibi na-eme ihe, nke n'aka nke ya, chọrọ ntinye ego akụ na ụba dị ala.
Anyị ga-ahụ ihe bụ isi uru ndị ojiji nke evaporative jụrụ nwere ike inye.
Dị ka anyị kwurula na mbụ, Ọ bụ usoro ịrụ ọrụ nke ọma na mmefu ike. Nchekwa ike nke oriri ike metụtara ọnọdụ condensing nke refrjiraeto eji. Ọ bụrụ na anyị nwere ahụkarị echichi, oriri ike nwere ike iru nnọọ elu onu ogugu enwere ugbua, mgbe na nrụnye nwere ike evaporation edinam, ike ego nke na- 45% nwere ike nweta.
Mmetụta dị ala na gburugburu ebe obibi
Ọbụghị naanị na anyị nwere nchekwa ego n'ihi iji akụ na ụba eme ihe ọfụma, mana enwerekwa mmetụta gburugburu ebe obibi dị oke ala. N'ihi evaporative jụrụ griin haus mmetụta nwere ike belata nke ukwu. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na anwụrụ gas dị ka carbon dioxide nwere oke oke. N'ihi arụmọrụ nke usoro ahụ, anyị na-ahụ na obere ume na-efu n'ihi arụmọrụ dị elu.
Otu n'ime ajụjụ nke ikuku evaporative bụ ma ọ na-enye nchebe ka ukwuu ma e jiri ya tụnyere usoro jụrụ ndị ọzọ. Ọ bụ usoro kwesịrị ekwesị maka usoro ndị ahụ na-enweghị atụ. Enwere ike iru ogo mmiri jụrụ oyi nke ruru ogo 25 ma ọ bụ obere. Nke a na-enye ohere iji n'etiti etiti ndụdụ na-adịghị ewepụta ihe dị elu na-eri ike.
Ya mere, e nwere igwe na-ekpo ọkụ nke na-eme ka okpomọkụ dị ala karịa ndị enwetara na ngwa ikuku. Ya mere, ị pụrụ ịhụ nnọọ ihe na-akpali ịzọpụta, ọ bụ ezie na arụmọrụ na-hụrụ ihe ejedebeghị site akọrọ bọlbụ okpomọkụ. Site na teknụzụ a, a na-eme condensation nke mmiri dị na ụlọ ọrụ ntụ oyi na ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Ọnọdụ okpomọkụ a zuru oke ka nrụgide na mpaghara dị elu nke sekit friji dị nnọọ ala. Obere nrụgide na circuit refrjiraeto na-ebelata ihe ize ndụ nke ịmịpụ oyi na nsonaazụ gburugburu ebe obibi.
Ọzọ uru na anyị nwere ike banyere bụ acoustic mmetụta na Mbelata oriri mmiri. Mmiri bụ ihe dị oke oke ọnụ ahịa ma na-abawanye ụba na mbara ala a. Mmetụta nke mgbanwe ihu igwe n'ihi mmụba nke griin haus na-akpata oké ọkọchị na-akawanye njọ. N'ihi nke a, mmiri na-adị ụkọ. Na ụdị usoro a anyị nwere ike ịchekwa na mmiri na ike oriri. Abamuru abụọ a na-enye nlekọta dị mma nke gburugburu ebe obibi.
Ka anyị hụ ihe dị iche iche ngwa nke evaporative jụrụ:
Ụlọ ọrụ ọkụkọ: sistemụ ndị a dị ezigbo mkpa na ụlọ ọkụkọ. N’ọnwa kacha ekpo ọkụ n’afọ, anụ ọkụkọ na-ekpo ezigbo ọkụ. Ekele maka usoro ikuku evaporative, a ga-ebelata ọnọdụ okpomọkụ na nsogbu metụtara nrụgide ọkụ. N'ụzọ dị otú a, ọ bụghị naanị na anyị hụrụ na nnụnụ ahụ nwere ọnụnọ ka mma, kamakwa ka mma ngwaahịa ndị a.
Industrylọ ọrụ ugbo: bụ mpaghara ọzọ ebe enwere ike iji usoro a. Na-enyere aka ịnọgide na-enwe okpomọkụ ikuku mgbe niile. Idobe anụ ụlọ a dị mkpa n'ime griin haus. Ọ dị mkpa ijigide nguzo dị nro nke okpomọkụ dabere na mmefu ike iji bulie mmepụta ma belata mmefu.
Lọ ọrụ ezì: Iji nọgide na-enwe okpomọkụ mgbe niile n'ime ụlọ ezì, ojiji nke ikuku evaporative dị mkpa. Nke a na-enye ogo dị elu na mmepụta anụmanụ na nkasi obi ka mma maka ya. Ma ọ bụ na usoro ihe a na-enye ikuku ikuku na-agbanwe agbanwe mgbe niile na ogo dị elu.
Dairylọ ọrụ mmiri ara ehi: ọ bụ ihe ọzọ na ndi nke ebe evaporative jụrụ nwere ebe. Ọkụ nrụgide na-aga n'ihu na ehi nwere ike ibute mbelata mmiri ara ehi. N'ihi usoro a, ọ ga-ekwe omume ịnweta ikike dị elu dị elu ma belata ọnwụ nke mmepụta n'oge oke ọnụ na okpomọkụ n'èzí. A na-abịakarị ọnụ ọnụ ugwu ndị a n'oge ngwụsị oge opupu ihe ubi na oge ọkọchị.
Na nkenke, anyị nwere ike ikwu na evaporative jụrụ eji dị ka friji etinyere na obi jụrụ elu, evaporative condensers, wdg Ejiri nchekwa nchekwa ume buru ibu, nchekwa ka ukwuu na nkwanye ùgwù maka gburugburu ebe obibi. Nke a na - eme ka ọ bụrụ usoro dị mkpa n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ ọrụ oyi ụlọ ọrụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu banyere jụrụ oyi na uru ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Evaporative jụrụ